Fifindran'ny coronavirus :: Mihatanora ireo marary avy amin’ny fifampikasohana • AoRaha
Mitombo isa hatrany ireo olona ifindran’ny aretina “coronavirus” avy amin’ny fifampikasohana. Nisy enina vaovao no voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19”, taorian’ny fitiliana natao teny amin’ny Institut Pasteur de Madagascar (IPM), araka ny fampitam-baovao avy eny amin’ny Ivon-toeram-pibai­koana momba ny “Covid-19” (Cco) Ivato, omaly tolakandro.
Tsikaritra fa mihatanora iretsy farany, satria eo ane­lanelan’ny 13 taona hatra­min’ ny 20 taona. Araka­­karaka ny maha betsaka ny olona marary avy amin’ny fifampikasohana anefa no vao mainka mampitangorona ny olona. Miseho lany ny tsy firaharahiana ny fisian’ny aretina.
“Avy amin’ny fifampikasohana avokoa ireto enina vaovao ireto, izay nifanera­sera akaiky tamin’ireo teratany vahiny nitondra ny aretina “coronavirus” nandalo teto amintsika. Tsy misy soritr’aretina ivelany avokoa izy ireo. Lehilahy ny efatra, 16, 19 sy 47 ary 49 taona ary vehivavy ny roa, 14 sy 20 taona. Dimy amby enimpolo ny fitambaran’ireo olona voaporofo fa mitondra ny tsimok’aretina, anio (Ndrl: omaly)”, hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Cco Ivato.
Notsindriany fa misy ankizy roa amin’ireo dimy amby enimpolo ireo. Salama tsara ry zareo. Tsy misy atahorana ny toe-pahasalamany. Efa nanaovana fitiliana ny olona nifanerasera taminy ka iandra­sam-baliny.
Tapitra kosa ny fitiliana faobe natao tamin’ireo olona avy any ivelany nahavita ny fihibohana. Hifantoka amin’ ny fidinana ifotony any amin’ ireo toerana nahitana an’ireo trangan’aretina azo avy amin’ ny fifampikasohana ny fanja­kana. Natomboka teny amin’ ny tetezan’i Bekiraro Isotry ny fidinana, omaly. Nanaovana fanadihadiana ny fitadiavana an’ireo nifampikasoka akaiky tamin’ilay vehivavy iray, 19 taona, avy eny Isotry. Hiitatra hatrany Toamasina sy amin’ny toerana hafa izany hetsika izany.